Home TOROHEVITRA FOTOTRA EUROPEAN Mpilalao Football Football Pedro Rodriguez Tantaram-pahaizana momba ny tantaram-pahaterahana an-tsarimihetsika malaza tsy fantatra
Ny LB dia manolotra ny tantara manontolo momba ny lalao baolina kitra malaza amin'ny anarana; 'The Facilitator'. Ny tantaranay Pedro Rodriguez Childhood Story plus Untold Ny zava-misy momba ny tantaram-piainana dia mitondra ny fitantarana feno momba ireo zava-nitranga mahatalanjona hatramin'ny fahazazany hatramin'izao. Ny analizy dia mirakitra ny tantaram-piainany talohan'ny lazany, ny fiainam-pianakaviana ary ny maro amin'ireo zavatra tsy fantatra sy tsy fantatra momba azy.
Eny, fantatry ny rehetra momba ny fahaiza-manaony, saingy vitsy no mieritreritra ny tantaran'i Pedro Rodreguez izay tena mahaliana. Ankehitriny tsy misy adieu intsony, aleo manomboka.
Pedro Rodriguez ny tantaran'ny ankizy momba ny tantaram-piainana tsy hita isa -Voalohandohan'ny fiainana
Pedro Eliezer Rodríguez Ledesma dia teraka tamin'ny andro 28tio 1987 tao Santa Cruz de Tenerife, Espagne, renin'i Monserrat Ledesma Encinoso sy ny rainy, Juan Antonio Rodríguez Pedro.
Pedro no hany zazalahin'ny ray aman-dreniny. Izy dia tsy mba toy ny karazana zaza mandevina.
Nampiofanina tsara i Pedro, ary nanana fifandraisana akaiky tamin'ireo ray aman-dreny. Ny fanabeazana tsara kokoa ho an'ny sekoly sy ny fanatanjahantena dia fanombohana tsara ny fiainana ho an'ilay zazalahy. Nahita ny fifandanjam-pahombiazana izy teo amin'ny famakiana ny bokiny sy nilalao baolina niaraka tamin'ny namana.
Pedro dia nanomboka baolina tamin'ny baolina kitra (taona 16). Nanomboka tao amin'ny 2003 ny asany tamin'ny tanora fony izy niditra voalohany tao amin'ny Akademia San Isidro izay nilalao hatramin'ny 2004.
Tao amin'ny 2004, izy dia nisarika ny sain'ny FC Akademia ao Barcelona. Pedro dia nahavita ny fitsapana tao amin'ny klioba ary taorin 'izany dia nasaina niditra tao amin'ny academy club club. Nanohy ny fianarany tany amin'ny academy izy ary nilalao ho an'ny ekipa tanora ao amin'ny klioba hatramin'ny 2005.
Ny taona 2005 dia nandeha tsara ho azy raha nanolotra fifanarahana matihanina izay nosoniaviny izy ary toerana iray tao amin'ny ekipa fahatelo. Teo anelanelan'ny 2005-2007, Pedro Rodríguez dia iray amin'ireo ekipa mpilalao fototra fahatelo.
Ny fampiroboroboana tanora Spaniard dia nahatonga azy hilalao ho an'ny ekipa faharoa amin'ny klioba manomboka amin'ny 2007 izay nahazoany tanjona marobe.
Tao amin'ny 2009 / 2010, Pedro no mpilalao voalohany teo amin'ny tantara mba handresy tamin'ny fifaninanana klioba enina tao anatin'ny herintaona, rakitsorin'ny Lionel Messi izay nanao izany tamin'ny 2011.
Amin'ny ankapobeny, Pedro dia nilalao lalao ofisialy 321 ho an'ny ekipa voalohany ao Barcelona, ​​ka nahatonga ny tanjona 99 ary nanome fanampiana 46 mahagaga izay mihoatra ny 50% (25) nankany Messi.
Ny ambiny araka ny filazany, dia tantara izao.
Pedro Rodriguez ny tantaran'ny ankizy momba ny tantaram-piainana tsy hita isa -Fiainana ao amin'ny fianakaviana
Ny renin'i Pedro, Monserrat Ledesma Encinoso sy dadany, Juan Antonio Rodríguez dia tsy dia mahalala firy momba ny maha-izy azy eo amin'ny aterineto.
Tatitra avy amin'ireo loharano malaza ihany koa dia manambara fa miaina ao amin'ny tanàna Espaniola amoron-dranomasina ao Santa Cruz de Tenerife izay nalaza ho tanàn-dehibe.
Nanao izay azony natao izy ireo mba hampakatra ny zanany lahitokana amin'ny fomba tsara indrindra izay nandoavam-bola. Pedro dia manome ny zavatra rehetra ilainy ho an'ny ray aman-dreniny.
Pedro Rodriguez ny tantaran'ny ankizy momba ny tantaram-piainana tsy hita isa -Relationship Life
Ny Fitiavan'i Pedro an'i Pedro dia mendrika ny haka tahaka. Nambarany niaraka tamin'i Carolina Martin izay mpanao kaonty ary nolazaina fa 5 taona efa antitra noho izy. Nihaona tamin'i 17 i Pedro. Tamin'izany fotoana izany i Carolina dia 22.
Pedro Rodriguez fitiavana tantara
Tsy toy ny sipa hafa mpilalao, ny pedro dia nanakana azy tsy hibanjina noho ny antony marim-pototra. Ireo vorona tia dia samy nanambady tamin'ny taona 2005 taorian'ilay raharaha fohy. Ireto ambany ireto ny sary mampiseho ny firaisany.
Jereo ny sary etsy ambany. Miara-miasa tsara amin'ny fiara ry zareo.
Eto ambany ny mpivady manana solomaso ny divay Bodega Iniesta mpanankarena izay an'ny naman'i Pedro dia mpinamana be sy ekipan'ny ekipa Barcelona taloha, Andres Iniesta.
Nanapa-kevitra ny hijanona amin'ny 8 taona izy ireo alohan'ny hiterahany ny zanany. Ny zanak'izy ireo voalohany dia i Bryan Rodriguez Martin tamin'ny 4th April 2013.
Ny fianakavian'i Pedro Rodriguez
Carolina Martin dia tena be fitiavana ary mikarakara tsara ny vadiny. Pedro dia lehilahy be fitiavana ary tompon'andraikitra amin'ny fianakaviany. Tsy manao zavatra koa izy. Tena fahombiazana tokoa ny fiainan'ny vadiny. Miverina indray izy ireo, mijery tsara tarehy tsara tarehy
Pedro Rodriguez sy ny vadiny, Carolina Martin
Ny fifandraisan'izy ireo dia miankina amin'ny fitiavana, fitokisana ary fifankahazoana. Noho izany, tsy nieritreritra ny fisarahana na fisaraham-panambadiana izy ireo. Tsara ny manamarika fa i Carolina Martin dia lazaina fa tena akaiky an'i Daniella Semaan izay vadin'ny Cesc Fabregas toy ny tamin'ny fotoana nanoratana ity lahatsoratra ity.
Satria mankasitraka ny fifandraisan'ny mpivady tsy manam-pinoana i Pedro, dia azo lazaina ihany koa izany Radamel Falcao, Nemanja Matic, tsy toy ny, Edinson Cavani ary Adriano Ny fiainan'ny fanambadiana dia marihina amin'ny raharaha ara-panambadiana sy ny adihevitra.
Pedro Rodriguez ny tantaran'ny ankizy momba ny tantaram-piainana tsy hita isa -Namonjy ny klioban'ny Tanindrazany noho ny Bankirompitra
Ny klioban'ny ankizy ao Pedro, San Isidro dia voavonjy tsy ara-dalàna noho ny fikasan'i Pedro Chelsea.
Ny ekipa fahaefatra Espaniôla fahaefatra avy ao Tenerife dia nahazo € 420,000 avy amin'ny famindrana ny mpilalao Chelsea, vola iray avo efatra heny amin'ny teti-bola isan-taona (€ 85,000).
Pedro dia Espaniard 10thy nilalao ho an'ny Chelsea FC tao amin'ny Premier League anglisy.
Pedro Rodriguez ny tantaran'ny ankizy momba ny tantaram-piainana tsy hita isa -Hery sy herimpo
Mampiasa ny tongony amin'ny lalao izy izay nanaporofo azy fa be dia be izy tamin'ny nilalaovana teo amin'ny lafiny roa.
Tsara toetra amin'ny fahaiza-manaony izy. Manana fanaraha-maso tsara ny baolina amin'ny lalao izy. Nahazo hafanam-po sy fahaiza-manao izy izay nahatonga azy ho mahatalanjona sy nankasitraka ny haingam-pandeha sy ny fametrahana fotoana lava be.
Ny fahalemen'i Pedro ihany no lohateniny.